Sajhasabal.com | जहाँ विरामीसंगै एम्बुलेन्स छटपटाईरहेछ...
डि. पी छत्कुली | नेपालको राजनिति गतिविधीमा बझाङ पहिलो नम्बरमा पर्छ भने धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाको चैनपुर धादिङकै पहिलो नम्बरमा आउँछ ।
जिल्लाका प्रमुख नेताहरु जन्मेका यो भूमीलाई राजनीतिले जति जतिनै चेतनशील बनाएपनि यहाँको विकासको हालत लाजमर्दो छ । राजनीतिक चेत र नेताहरुको मातृभूमिका भए पनि यो गाउँपालिकाको हालत खराब अवस्थामा छ । पालिकाका अन्य वडाका कुरा छोडौं नेताहरु जन्मिएका वडामै कोहि बिरामी परेभने सहज अवस्था छैन । एम्बुलेन्सनै छटपटिने बाटोमा बिरामीको हालत के होला ?
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने यो सडक अहिले ज्वालामुखी गाउँपालीकाकै एक दृष्टिहीनताभएको व्यक्ति जस्तो भएको छ । यहाँ अहिले छट्पटाईरहेका बिरामीहरु स्वास्थ्यचौकी लैजानु पर्यो भने बिरामी लिन आउने एम्बुलेन्स नै बाटोमा छटपटाईरहेको देख्नुपर्ने हुन्छ ।
धादिङका कच्ची सडकहरुमा (क) नम्बरको बाटो हो यो । तर 'क' नम्बरको बाटोकै हालत एस्तो हुँदा 'ख, ग र घ'मा पर्ने बाटोहरुको स्थिति झन कस्तो होला ?
जिल्ला सभापतिदेखि सांसदहरु कयौं पटक यसै ठाउँबाट जितेपनि नत यहाँ एक उच्चस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयनै छ, नत गुणस्तर स्वाथ्यप्रदान गर्ने अस्पताल नै छ ! छन् त केबल नाम चलेका पत्रकार, जिल्लाका बुद्धिजिवीहरुको जमात । करोडौं बजेट आउँछ महिना बित्न पाउँदैनन् पुन: लथालिङ्ग हुने विकास हुन्छ । अर्को कुरा हिउँदे विकास नहुने तर असारे विकास हुने यो पद्धति गाउँदेखि शहरसम्म त विध्यमान छदैछ । यो गाउँपालिकालाई पनि त्यस्तो प्रकारको असारे विकासले अछुतो छाडेको छैन ।
हरेकलाई लाग्न सक्छ कि यो सदरमुकामदेखि कयौं कोश टाढाको बाटो होला ! तर यो जिल्ला सदरमुकामबाट मात्रै १७/१८ किलोमिटर भित्रै पर्ने बाटो हो । यहाँ क्षमता, सिप, योग्यता भन्दा पनि पहुँच हुनेवाला सधैं हावी हुने परम्परा चलिरहेछ । यस्को अन्त्य कहिले हुने र ज्वालामुखी गाउँपालिकाले समृद्ध गाउँपालिकाको नामले परिचित हुने ? अन्यथा धेरै नेता जन्मिएका ठाउँमा धेरै भ्रष्ट र अनियमितताका कारिन्दा पनि जन्मिदा रहेछन् भन्ने बुझाई राख्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्ने छ ।
तश्विर क्रेडिट: अमिस